Onye guzobere ya na onye isi ya John Rasco nyere m ngosipụta peek nke ihe ngwanrọ dị egwu dịka Ọrụ (SaaS) SEO dashboard izu ole na ole gara aga ma ugbu a Nwee Ume na-agá »live na mmadá» es na-enwe na ha ohuru SEO dashboard. RefreshWeb buru ụzọ wue ngwa ahụ n'ihi nkụda mmụọ maka ndị ahịa nke ha ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịlele anya n'akụkụ niile nke isiokwu azụmaahịa ịchọrọ nyocha.
E nwere atọ dị mkpa ọcha nke search engine nsuso… the olu nke ọchụchọ kwa isiokwu, gị ọkwa dị ugbu a na mpịakọta (na ikwu mmekọ), na nke gị akụkọ ihe mere eme n'ọkwá (ma ị na-enweta ma ọ bụ na-efunahụ ala). Dị ka m maara, ọ nweghị ngwaahịa ọzọ na ahịa nke na-achọ ọchụchọ dị ka 'ahịa' ma sụgharịa ọkwa gị n'ahịa share. RefreshWeb emeela nke a site na iji nyocha akuko dị mfe ma dịkwa ike.
Na ikike iji wuo omenala isiokwu anatara nke a na-eche maka ebumnuche ahịa gị, ị nwere ike mechaa nweta njikwa na mbọ mbọ gị nwere. Agaghị eburu ọzọ site na mkpokọta data. You'll ga-enwe ike ihu otu etu ọkwa ga-esi bulie oge na ebe ohere ọhụụ ga-abawanye. RefreshWeb SEO Management Dashboard na egwu egwu metrik dị mkpa:
Ahịa gafere 5 isi engines ọchụchọ
SEO na-enye software maka akụkọ dị ugbu a na akụkọ ihe mere eme
Ọkwá na 5 isi search engines jikọtara ọchụchọ olu
Isiokwu trending akụkọ na zuru ezu ma e wezụga akuko
SEO di omimi nchịkọta n'ihi na onye ọ bụla isiokwu
Ise akụkọ na-abịa na $ 250 kwa ọnwa ngwugwu (emelitere kwa izu):
The TASM erute bụ peeji ụlọ maka onye ahịa (Ahịa A Na-enweta Achọta Achọ? TASM?). Ọ na-egosi pasent nke TASM ruru yana ọkwa ọchụchọ dị ugbu a maka okwu ọ bụla. Usingmegharị ihe karịrị otu okwu na tebụl na-egosi ya na chaatị.
The GoogleRankings na-eji otu teknụzụ iji gosipụta nsonaazụ, mana ị na-ele ọkwa kama ịbịaru. A na-enyocha 5 nke isi engines United States.
The Akụkọ SEOProgress na-atụle nsonaazụ sitere na ụbọchị abụọ ọ bụla na sistemụ ahụ, yana akara ngosi mmanya na elu na-anọchite anya uru na ọghọm. Igosiputa mmanya na eserese mmanya na-egosiputa okwu ọchụchọ metụtara nsonaazụ ahụ.
The Isiokwu Ndebanye aha Akuko na-enye gị nchịkọta nke uru na ọghọm maka ụbọchị dị ugbu a, yana isiokwu ndị na-ejikọ izu 5 n'izu ọkwa, yabụ ị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na usoro a na-agagharị ma ọ bụ ala. Nchịkọta izu maka oge ọ bụla nwere ike ịgbanwe, dabere na ihe ndị dị ka 19 dị iche iche data Google dị na US, ebe Googlebot nọ na ntanye, wdg. ị nwere anomaly ma ọ bụ nsogbu.
The Nchịkọta eserese bụ ngwa ọrụ dị ukwuu maka igosipụta njikwa njikwa oge, mana achikota ya na okwu niile na ngalaba ọkwa ọ bụla. Nke a na - enyere aka idebe mkpesa na ọkwa dị elu. Nkọwa niile dị site na sistemụ, mana ọ na-esiri onye na-amaghị SEO ma ọ bụ ọrụ na-aga n'ihu iji nweta ozi granular.
Ndi wuru ahia web web wuru RefreshWeb SEO Management dashboard. Ọ bụ ngwa ọrụ njikwa SEO dị ike nke na -eziwanye arụmọrụ gị yana kọọ ozi dị oke mkpa na SEO nchịkọta n'ụzọ bara uru, nke a pụrụ itinye n'ọrụ. Nwere ike ịlele a vidiyo na ọrụ RefreshWeb dị ka nke ọma.
Ndenye ego ọkwa ọla edo na-abịa site na nkwado email sitere n'aka ndị na-ere ahịa n'ezie na otu RefreshWeb. Ndụmọdụ ọkachamara sitere na ọdọ mmiri na SEO njikwa ngwa ọrụ mepụtara na ndị ọkachamara ọchụnta ego n'uche? Nke ahụ bụ ngwakọta siri ike iti. Mee ka John mara na ị gụrụ post ebe a Martech Zone!
Tags: google ogoisiokwu trendingume ọhụrụakụkọ ọganihuseo refreshweb seoTasmreach
Predictive Marketing Analytics na ThinkVine
Ọkt 30, 2009 na 10:38 AM
Chei, Ama m na onye isi m ga-enwe mmasi na komputa ohuru a! Aga m ezigara ya ozi a, ekele maka ozi ahụ, ọ dị oke mma!
Ọnye na -bụ Susan McElhenney?
Ọkt 30, 2009 na 7:47 PM
RefreshWeb SEO dashboard n’ezie na-akpali akpali ma baa uru. Cleanlọ ọrụ ahụ dị ọcha na-egosi ndị njikwa metrik na-elekọta ya n'ụzọ dị mma iji mee ka ọrụ rụọ ọrụ. M ji ya na-amasị m.
Nov 4, 2009 na 4:05 AM
Echere m na ha dị n'ihu usoro ahụ, yana, na-ele Search na ọhụụ nke 'ahịa òkè'. Anyị niile ga - emesịa nọrọ ebe ahụ - mana ọ dị mma ịhụ ka mmadụ ga - edu ndú!
Nov 2, 2009 na 2:17 AM
Lee ezigbo! Ga-edebe dashboard SEO gị na ndepụta m maka ndị ahịa.
Ndị folks na RefreshWeb dị ezigbo mma ka ha na @Kryanoutloud rụọ ọrụ